कांग्रेस नेत्रृले रेणुलाई लेखेको पत्र–मतपत्र च्यात्नेलाई कसरी बोक्न सकिन्छ ? | News Dabali
कांग्रेस नेत्रृले रेणुलाई लेखेको पत्र–मतपत्र च्यात्नेलाई कसरी बोक्न सकिन्छ ?
August 3, 2017 | 7:57 pm
प्रिय रेणु दाहालजी
बहुत दुखका साथ यो पत्र लेख्दैछु । भरतपुर १९ मा मतपत्र च्यातेकोमा तपाईंले माफी माग्नुहोला भन्ने आशा थियो तर माग्नुभएन । पुन मतदान हुने भएपछि अवश्य माफी माग्नुहोला भन्ने थियो तैपनि माग्नुभएन ।
तपाईंप्रति मेरो विषेश सहानुभुति छ किनभने तपाईं महिला हो, युवा हो र केही गरौं भन्ने जाँगर पनि देखिन्छ । मतपत्र च्यात्नु महागल्ती थियो, अपराध थियो । गल्ती गर्ने तपाईंहरु अनि प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हामी कांग्रेसजनले । कस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा फसेका छौं हामी कांग्रेसजन । हाम्रो दुर्भाग्य र तपाईंको सौभाग्य हो– तपाईं भरतपुरमा नेपाली कांग्रेसले भोट दिनुपर्ने उम्मेदवार हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गल्ती भइसकेको छ, अब यसलाई सच्याउन सकिन्न । आफ्नै गल्तीले नेपाली कांग्रेसलाई लागेको घाउमा मतपत्र च्यातेर तपाईंहरुले झन नुनचुक हाल्नुभयो ।
भरतपुरमा धेरै कांग्रेसजनले तरक्क आँशु चुहाएर तपाईंहरुको चुनाव चिन्हमा छाप लगाएका छन् । यो कुरा तपाईंहरुलाई थाहै छ । कांग्रेसको रुख चुनाव चिन्ह भनेको नेपालको इतिहास हो, नेपालको सबैभन्दा पूरानो र निरन्तरता पाएको चुनाव चिन्ह हो । २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको चिन्ह यही थियो । यति गौरवशाली चिन्हलाई मत हाल्ने अवसर गुमाएर भरतपुरका कांग्रेसजनले तपाईंको चिन्हमा मत दिए ।
ज्यानमार्ने राजनीति छाडेर भोट माग्ने राजनीतिमा आउनुभयो, हामी यसमा खुसी छौं तर भोट माग्ने राजनीतिमा पनि मतपत्र च्यातेर ज्यानमारा शैली अपनाउनुभयो । कांग्रेसले समर्थन गरेको उम्मेदवारले यसो गर्नु भनेको कांग्रेसलाई नै पनि चोट पुराउनु हो । नेपाली कांग्रेसको यही भावना बुझेर पनि मतपत्र च्यातेकोमा तपाईंहरुले माफी मागिदिनुहुन्छ भन्ने अझै आशा गर्दछु ।
फैसला अब जनताको हातमा छ, जनताको फैसला अवश्य स्वीकार्नुहोला, भरतपरमा अबको मतगणनामा तपाईंहरुको तर्फबाट कुनै अनिष्ट नगर्नुहोला । तपाईंहरुको कारणले नेपाली कांग्रेसका हामी सबै लज्जित भइसकेका छौं, थप लज्जित नबनाउनुहोला । लोकतन्त्र भनेको जनताको मत हो र त्यो मतको सम्मान हरेक उम्मेदवारको कर्तव्य र धर्म हो । आगामी दिनमा यो कुरा मनन गर्नुहोला ।
मतदान हुनु अगावै माफी मागेर गल्ती सच्याउन आग्रह गर्दछु ।